MUSTARD IYO KHAL: SIDA LOO ISTICMAALO ISKU DARKA KA SOO HORJEEDA BARADHO DUQSIYO COLORADO - BARADHADA
Sida loo takhaluso baradho baradho Colorado leh khardal iyo khal
Baradho Baradho Colorado waa noocyada cayayaanka ka soo qoyska ee lamid ah caleen, a subfamily of kuwa lamid ah caleen dhab ah.
La baadhay 1824 kii Thomas Tomas, oo ah mid ka mid ah cayayaanka ugu khatarsan ee dalagyada bidixda.
Xilligan, ma aha oo kaliya maandooriyeyaasha kiimikada si ay ula dagaallamaan duqsiga, laakiin sidoo kale daaweynta dadweynaha ee baradhada barafka Colorado ayaa helay sumcad ballaaran.
Ma taqaanaa? In kasta oo xaqiiqda ah in cayayaanka la helay magaciisa ka dib burburkii beeraha baradhada ee gobolka Colorado ee 1859, dalkooda waa gobolka Sonoran ee waqooyiga bari Mexico.
Colorado baradho Colorado: sharaxaad cayayaan
Jirka jirka Colorado baradho qoyan waa qaabka oval, 7-12 mm dheer, dusha sare waa jeexan, jaale, madaxa iyo prothorax ayaa lagu daboolay dhibco. Goob kasta wuxuu leeyahay shan dhirbaaxo madow.
Ciriiri-darrooyin aan caadi aheyn - ee nolosha dumarka, celcelis ahaan, waxay dhigaan ilaa 800 ukumo, kooxo yaryar oo ah 30-40 waliba. 10-15 maalmood ka dib, dirxiga fareemka ah wuxuu u muuqdaa ukun, noloshoodu waxay socotaa 25 maalmood.
Marxaladda dhogorta, afar da 'waa kala maqan yihiin, taas oo ay kala soocaan molts. Marka hore iyo da'da labaad, dirxiga ayaa leh midab khafiif ah oo madow; da'da saddexaad, ubaxa waxay soo gashaa liishaan, casaan ama jaale ah. Madaxooda, lugaha iyo laba safaf oo ku yaal dhinacyada jidhka waa madow.
In koowaad koowaad iyo labaad, dirxiga ayaa weli ku jira kooxo dusha sare ee caleemaha, saddexaad iyo afaraad, waxay u wareejiyaan dhirta deriska ah. Inta lagu jiro xilliga guurka, inta ugu badan ee dirxiga ah ee burrow ku soo boodo ciidda si qoto dheer ah 10 cm fogaan ah 10-20 cm ka soo baadiyaha, taas oo ay cuneen.
Ardayda waxaa la sameeyaa 10 ilaa 20 maalmood. Xilliga dayrta, kuwa lamid ah waxay burrow ku daadiyaan 70 m ciidda oo barafoobaya illaa guga, helitaanka dusha sare kadib marka heerkulku kor u kaco ilaa 15 ° C.
Xilliga cimilada, xawaaraha duulimaadka ee lamid ah - 4-8 km saacaddii. Burburinta biyaha, guluubyadu ma degaan, wabiga hadda xajiya, isaga oo siinaya fursad uu ku kiciyo xeebta.
Ma taqaanaa? Midabka casange ee xooggan ee dirxiga waa calaamad muujinaysa joogitaanka carotene midabaynta midabka ee jirkooda.
Waa maxay baradhada barafaysan ee Colorado
Sanad walba, milkiilayaasha dachas waxay kor u qaadayaan su'aasha ah sida looga takhaluso jiritaanka baradhada barafka. Baradhada baradhada Colorado waxay leedahay dufan la'aan, waxay burburisaa baradho, jirrido, caleemo (guga), ubax (xagaaga), digriiga (xilliga dayrta hore). Sida ugu dhakhsaha badan heerkulka ayaa hoos u dhacda, cayayaanka ayaa ku boodaya ciidda.
Dhaqdhaqaaqa tartiib tartiibka ah ee geedka ayaa loola jeedaa dhaawac soo gaadhay, sababtoo ah tirada lamid ah ayaa sii kordhaya waqtiga, taas oo xitaa khatarta khatarta ah. Daraasad, ka sokow baradhada, cuno eggplants, yaanyada, basbaaska macaan oo farxad leh.
Waa muhiim! Kantaroolka waa dukaanka rikoodhka dheer oo noolaa oo ka adkaata sanado gaajo ah, oo ku dhacaya muddo 2-3 sano ah, kadibna wuxuu awoodaa in uu siiyo caruur caafimaad qaba.
Baradiidka baradhada Colorado waa mid aan la geli karin sunta kiimikada kiimikada sababtoo ah xaqiiqda ah in ay kor u dhaaftay dhulka, taas oo xitaa dib-u-dhajinta beerta beerta horteeda kama hortagi karto.
Sidee looga takhalusaa jiritaanka baradiidka Colorado, karinta isku dar ah
Mustard si dhakhso ah oo ammaan ah uga takhalusi doonaa baradho baradho ah Colorado.
Dadka degaanka xagaaga ayaa loo beeray iniinbuur si ay uga cabsiiyaan cayayaanka si aysan u oggolaanin haramaha si ay u koraan una hagaajiyaan dhismaha dhulka.
Waad ku mahadsantahay awoodda ay u leedahay inay si degdeg ah u koraan, ka nadiifinta dhulka Phytophthora iyo qolof, oo aan caleenta ciidda, waxay ka caawisaa in ay la dagaallanto wireworm, qoryaha, slugs.
Waxay leedahay saameyn togan ee dagaalka ka dhanka ah Colorado baradho baradho. Waxaa ugu wanaagsan in la beero khardal u dhexeeya safafka baradho iyo eggplants, soo qaado inta lagu jiro xilliga ubaxyada iyo fidsan ee dhirta kuwaas oo noqon kara dhibanayaasha Colorado baradho baradho.
Vinegar sidoo kale waa faa'iido ka soo horjeeda baradho baradho Colorado. In khalkii ah waa acetic acid, khamriyado adag, ester iyo aldehydes, iyo asalka asalka ah ee 80% ee feejignaanta waxay burburin kartaa cayayaanka marka ay gudaha ku soo gasho.
Laakiin saameynta ugu fiican waxay noqon doontaa isku dar ah iniin khardal iyo khal. Wixii karinta 100 g oo ah budada berkedda iyo 100 ml oo ah 9% oo khal qashin ah waa in lagu qasi karaa hal baaldi biyo ah.
Waxaa jira nooc kale oo ka mid ah isku dhafka khardal-khal 200 g oo budada khardal ah oo lagu qasi karo 10 litir oo biyo ah kuna adkeyso 12 saacadood, ka dibna ku dar 150 ml oo khal. Sidoo kale, roodhida, faleebo ah diirka basasha, toonta ama dixirigga ayaa lagu dari karaa daaweynta duqadda baradhada ee Colorado, taasoo kor u qaadi doonta waxtarnimada daaweynta dadka.
Sida loo isticmaalo isku darka
Si loo dhigo iniin khardal ah iyo geed isbonjiid ah oo ka soo horjeeda baradiidka Colorado baradhada si aad u shaqeyso, waa inaad raacdaa xeerarka soo saarista iyo isticmaalka xalka. Waxaa lagama maarmaan ah in la dhajiyo dhalada barafka bilowga koritaanka iyo marka tirada lamiddu ay korodho inta lagu jiro ubax.
Waxaa fiican inaad samayso buufinta fiidkii, marka kulaylka maalinku ka yimaado, cimilada iyo cimilada.
Wixii soo saara, qadar badan oo xalka ah ayaa loo baahan doonaa, buufinta waa in si joogta ah loo sameeyaa, laakiin daaweynta waa in la joojiyaa 20 maalmood ka hor inta aan la goyn. Xalka a khaliijka oo saafi ah waa in aan la waraabin. Marka dusha sare laga shaqeeyo, iskuday inaad ka hortagto isku darka ka soo daahay. Mustard iyo waa la waraabin karaa iyo caleemaha buufin.
Sidoo kale ma iloobi kartid in isticmaalka xalka 3 saacadood uusan macquul ahayn, waa in la sameeyaa isla markiiba isticmaalka ka hor. Mustard ee dagaalka ka dhanka ah Colorado baradho biqil wuxuu noqon doonaa awood lahayn haddii la fuliyo buufin leh ee saameynta qorraxdu si toos ah: waxay lumin doontaa tayada, iyo gelitaanka daadadka roobka ayaa si fudud u xoqin kara xalka.
Waa wax aan loo baahnayn in la isticmaalo isku darka ka dib roobka, ka dib dhoobada badan, cimilada qiiqa, inta lagu jiro dabaylaha xooggan. Waqtiga ugu habboon ee geeddi-socodka waa fiidkii hore ee qorraxda.
Waa muhiim! Dhibaatada ugu weyn ee dhirta aan la keenin dadka waaweyn, laakiin by dirxiga ah ee da'da saddexaad iyo afraad ee horumarinta, sidaas darteed dagaalka aan la duubi karin dib loo dhigo.
Isticmaalka daawada dadku waxay leedahay faa'iidada ugu weyn ee diyaargarowga kiimikada - waxay si gebi ahaanba amaan ugu yihiin dadka, xayawaanka, dhirta iyo bay'ada, sababtoo ah xaqiiqda ah in aanay ahayn sunta.